Umkhosi womhlanga waseZinqoleni | News24
Umkhosi womhlanga waseZinqoleni
PHOTO: sithunyelwe Izintombi
KUGUJWE umkhosi womhlanga Ezinqoleni ngoMgqibelo. Lomgubo ujujwa minyaka wonke lapho kuhlangana izintombi zakuzona zonke ezindawo nezigodi ezingaphansi komasipala omkhulu iUgu District Municipality. Ngaphambi kokuthi kwenziwe lomcimbi izintombi ziyayalwa abomama abadala esigodini zazo ngokuziphaktha kanye nokuthi luthini usiko lamazulu ngokuzigcina uyintombi nto.
Lomcimbi ugujwe endaweni yakaNyuswa umasipala woGu ubambisene nomyango wezokuvakasha iSouth coast tourism ukuthuthukisa ezokuvakasha nokukhangisa ngamasiko akulomasipala ezivakashini eziphuma kwamanye amazwe nakwezinye ezindawo ezingazi ngosiko lamaZulu. Okhulumele iUgu south Coast tourism Ezinqoleni uthe izivakashi ziye zikujabulele kakhulu ukubona lomcimbi futhi ziphinde zithole ulwazi ngemvelaphi yamasiko ezintombi